Madaxweyne Gaas oo la kulmay Wafdi ka socda QM – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo la kulmay Wafdi ka socda QM
Maarso 29, 2016 5:59 b 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 29-March-2016 xafiiskiisa ku qaabilay wafti kasocdey Jimciyadda quruumaha ka dhexaysa oo uu hoggaaminayey ku-xigeenka Wakiilka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya ee dhinaca Aadanaha Peter De Clercq.
Kulanka ayaa Madaxweynaha waxaa kuwehelinayey Madaxweyne ku-xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey, Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Axmed Cali Xaashi iyo xubno katirsan golaha Wasiirada dawladda Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo Peter De Clercq ayaa kulankooda waxay uga wada hadleen Arrimaha banii’aadantinimada iyo heer heerka ay ka joogta ilaalinta xuquuqda aadanuhu deegaanada Puntland arrintaas oo noqotay mid aad loogu ammaanay Dawladda Puntland qaabka ay u ilaaliso xuquuqda Aadanaha.
Sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay wadashaqaynta ka dhexaysa hay’adaha qaramada midoobey ee Puntland kusugan iyo Dawladda Puntland waxaana la tilmaamay in ay meel wanaagsan marayso wadashaqayntoodu isla markaana loo baahan yahay in lasii dardar geliyo wadashaqayntaasi.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Peter De Clercq ayaa sidoo kale kawada hadlay arrimaha abaaraha ee ka jira Puntland iyo qaabkii Qaramada midoobey iyo Dawladda Puntland ay isaga kaashan lahaayeen gurmadka abaaraha, kaas oo ay dawladda Puntland mar hore bilawday.
Ugu dambayntii, ku-xigeenka Wakiilka xog-hayaha guud ee qaramada midoobey ee Soomaaliya ee dhinaca Aadanaha Peter De Clercq ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada difaaca Puntland oo dhowaan jebiyey kooxihii Al-shabaab ee duullaanka kusoo qaaday isla markaana kasoo hooyey guulihii taariikhiga ahaa.
Markab Faransiis ah oo Qabtay Doon-ni Hub u soo siday xeebaha Somalia